Archive du 20191111
Politika Hijoro ho mpanohitra ny HVM
« Antoko velona, miaina ary vonona ny hisehatra amin’ny fiainam-pirenena ny antoko HVM ».
Hery Rajaonarimampianina « Halaviro ny herisetra sy fampihorohoroana ary fifanenjehana »
Tsy tonga nanotrona ny zaikaben’ny antoko HVM, ny sabotsy lasa teo, ny filoham-boninahitra ity antoko ity dia ny filoha teo aloha, Hery Rajaonarimampianina, saingy nitondra hafatra manoloana ny fiainam-pirenena.
Jimmy ho ben’ny tanànan’Alasora Tsy handiso fanantenana ny vahoaka, hoy Ravalo
Hanohana amin’ny fampandrosoana an’Alasora miaraka amin’ny kandida Jimmy andriantsoa i Marc Ravalomanana. Tonga teny amin’ny Kaominina Alasora,
Rina Randriamasinoro Avy amin’ny vahoaka ary miasa ho an’ny vahoaka
Na tamin’ny adihevitra natao tetsy amin’ny lapan’ny tanàna na amin’ny fitsidihana maro be ataony dia nasehon’ny kandidan’ny TIM Rina Randriamasinoro, fa avy amin’ny vahoaka tokoa izy ary mikatsaka izay hahasoa ny vahoaka.
Tetikasa Tanà-masoandro Ireo sefo fokontany no ampiasaina handresy lahatra ny vahoaka ?
Araka ny taratasy lah. 453/MAHTP/SG/DGSF/DDPF/SRD/CIRDOMA avy amin'ny minisiteran'ny fanajariana ny tany sy ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy, tamin'ny 05 novambra 2019 lasa teo,
Hovonoina daholo ?
Sarotra hadinoina, hono, ny lasa, indrindra, rehefa izy izay no nandratra hatramin’izao na tiana na tsy tiana.
Hetraketraka tany Andapa Vehivavy 6 no maty tao anatin’ny tapa-bolana
Tsy milamina ny fandriampahalemana any amin’ny distrikan’Andapa, Faritra SAVA.
Vita ny lalana, mirimorimo ny fiara Matahotra ny mponina eny Antanimenakely
Vita tanteraka ny lalana eny Antanimenakely, mihazo an’Itaosy amin’izao fotoana izao. Dibo-kafaliana ny mponina noho izany saingy sahirana ihany koa. T